म्याग्दीकी देउमाया पुनको लास एटलान्टिक महासागर अल्गार्भको समुद्री किनारमा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
म्याग्दीकी देउमाया पुनको लास एटलान्टिक महासागर अल्गार्भको समुद्री किनारमा
Posted on मार्च 9, 2010 by nepalkuwait
गत १८ फरबरी बिहानदेखि अल्गार्भ अल्बुफेरा पोर्चुगलमा बिगत १० बर्ष यता बसोबास गरिरहेका नेपाली श्रीमान् चित्र बहादुर पूर्जा सँग बेखबर भएकी म्याग्दीकी देउमाया पुनको लास एटलान्टिक महासागर अल्गार्भको समुद्री किनारमा भेटिएको थियो। त्यसदिन श्रीमान् चित्र बहादुर पुर्जासँग कफी पिएर बाहिर निस्किएकी देउमाया राति घर आइनन् । रातभर चित्रले मायाको खोजी साथिभाईकहा गरे ।तर फेला परिनन्।औधी थकान सङै चित्रले रात काटे। भोली बिहान साथीकहाँ कतै बसिन् कि भनेर खोज्न जाँदा पत्रिका पढिरहेको पोर्चुगिज नागरिकले पत्रिकामा छापिएको समाचार देखाएपछि श्रीमान्ले श्रीमतीको लास भेटिएको थाहा पाएका थिए ।
देउमायालाई सबैले माया पूर्जा भनेर चिन्दछन् ।ततपश्चात अर्को शहर पर्तिमाओमा सोधपुछ र कानूनी प्रकृया पूरा गर्न श्रीमान् चित्र बहादुर पूर्जासँगै यूरोनेपाल अनलाईन डट कमका सम्पादक पत्रकार केजिन राई, एनआरएन अल्गार्भका सचिब प्रेम परियार, बिश्व वेबक्याम कबिताका दोश्रो बिजयी कवीअमृत परियार लगायतका अल्गार्भमा बस्ने नेपालीहरु पर्तिमाओ अस्पताल,प्रहरी चौकीमा जानु भएपछि मायाको निधन भई सकेको पुष्टी भएपछि श्रीमान पूर्जा भाब बिब्हल भएका थिए। उनको आत्महत्या हो या हत्या हो केही खुलेको थिएन । डिलमा बसेर माछा मारिरहेकाहरुले झोला र कपडा तैरिएको देखेपछि पुलिसलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार धेरै समय पहिले डुबेको लास होइन । कानूनी रुपमा उनको हत्या अथवा आत्महत्या हो यतिबेला यहाँको अपराध अनुसन्धान हेर्ने पुलिसले जाँच गरिरहेको कुरा स्थानीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले बताए । सबैजनाको उत्सुकताको विषय बनेको देउमाया पुर्जाको पोष्टमार्टममा उनको मृत्युलाई आत्महत्या भनिएको छैन ।
त्यसो भए के देउमायालाई कसैले षडयन्त्रपूर्वक मार्न लगायो या मारियो त पोष्टमार्टम भन्छ; देउमायालाई कसैले जबरजस्ती गरेको या आक्रमण गरेको देखिँदैन । देउमायाको शरीरको पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टर कन्सेसाओ रिबेइरो भन्छन्, पानी घाटीमा अडकिएर सास फेर्न नसकेको कारण मृत्यु भएको हो । इिन्स्टच्यूट अफ मेडिसिनका डाइरेक्टर मिगेलले भने, उनको हत्या भएको देखिएन । आत्महत्या नै हो भनेर हामीले पुष्टी गर्न सक्दैनौँ । घटना आत्महत्या जस्तो देखिन्छ तर उनी ढुँगामा चिप्लिएर लडेकी पनि हुन सक्छिन् । चिन्तै- चिन्ताले ढुँगाको किनारमा बस्दा रिँगटा लागेर लडेको पनि हुन सक्छ । उनको जीउमा कुनै चोटपटक छैन । उनको छाता भेटिएको ठाउँमा पुग्ने जो सुकैको पनि ज्यान आङ सिरिँग हुन्छ । त्यो घटना घटेको ठाऊ सर्बसाधरण जान अनुमति नभएको पोर्चुगिस सरकारको निषेधित क्षेत्र हो। उनको लास निकाल्ने समुद्री प्रहरी विभाग मारिटिमोका प्रमुख निर्देशक फिलिपका अनुसार अक्सर यस्ता घटनालाई आत्महत्याको नजिक मानिए पनि देख्ने कोही नभएपछि आफै मरेकी हुन् भन्न मिल्दैन । रगतमा पनि त्यस्तो कुनै शँकाको सम्भावना नरहेपछि रिपोर्ट नआए पनि लास लैजाने अनुमति दिएको छ पोर्चुगिज प्रहरीले। अन्तिम अवस्थामा देउमायाले नेपाली दिदीबैनीलाई गरेको टेलीफोन सम्पर्क अनुसार उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने कुरामा नेपाली समुदाय विश्वस्त रहेपनि उनको आत्महत्याको कारण के हो प्रष्ट छैन ।
देउमायाको लास नेपाल पठाईयो देउमायाको लास नेपाल पठाउन देउमाया सहयोग मूल समितिले सम्पूर्ण तयारी दिनरात खटेर गरे। मूल समिति सँयोजक केजिन राई र सदस्य तथा एनआरएन अल्गार्भका सचिब प्रेम बहादुर परियारका अनुसार केएलएमको जहाजबाट उनको शवलाई पर्तिमाओ-लिस्बोन-फ्रयाँकफ्रट – दिल्ली हुँदै काठमाण्डू पुर्याएको थियो। पोर्चुगलको समय अनुसार दिउँसो एक बजेर ४० मिनेटमा उनको उडान गरी मार्च १ तारिख नेपालको समय अनुसार दिल्लीबाट इण्डियन एयरलाइन्सको जहाज नम्बर ८१३ ले दिउसोको ३ बजेर २५ मिनेटमा काठमाण्डूमा शव पुगेको थियो। उनका पति चित्र पूर्जा कागजी प्रक्रिया सहज गराउन एकदिन अघि काठमाण्डू उत्रिएका थिए। लिस्बोन, म्याड्रिड, कतार हुँदै उनी कतार एयरवेजबाट काठमाण्डू पुगेका हुन्। शव सार्वजनिक बार लाभेन्तो नाउँको कम्पनीले नेपाल शव पठाउने आधिकारिक कागज पोर्चुगिज सरकारलाई बुझाएपछि स्थानीय अस्पतालमा देउमायाको लास सार्वजनिक गरिएको थियो। लमतन्न निद्रामा सुते जस्तै देउमाया पुर्जासँग छाँद हाल्दै बडो मर्मस्र्पर्शी भावमा श्रीमान् चित्र पुर्जा रोए । उनले “उठ न माया, उठ !” भन्दा त्यहाँ भएका सबै नेपालीहरु भक्कानिएका थिए । रातमा शव नजिक बस्न नपाइने पोर्चुगिज नियम अनुसार राति फेरी उनको लासलाई अस्पताल भित्रै लगिएको थियो। म्याग्दी शिख गाविसकी हँसिली र फरासिली देउमाया पूर्जाको मृत्युको खबर यसरी सुन्न पर्ला भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन । लिस्बोनमा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय चलाउने योजना बनाएकी, भर्खरै गाडी चलाउन सिकेकी र हिम्मतवाली देउमायाको एकाएक मृत्युको खबर डढेलो जसरी चारैतिर फैलिएको थियो। श्रीमान् छिन्छिन्मा बेहोस भएर ढलिरहेका छन् भने उनलाई चिनेका नचिनेका
प्रवासीहरु शोकमग्न छन् । घटनास्थलमा जाने पोर्चुगिज, नेपाली सबैले घटनालाई आत्महत्याको नजिक मानेका छन् भने अपराध प्रहरीको विशेष टोली घटनाको अनुसन्धानमा लागेको छ । भएको के थियो ? देउमाया र उनका लोग्ने चित्र बहादुर पुर्जा छुट्टीमा थिए । चित्रको पोर्चुगिज नागरिकता आइसकेको थियो भने देउमाया दिल्लीमा रहेको पोर्चुगिज दूतावासबाट कागतपत्र मगाएर पोर्चुगिज नागरिकता माग्ने तयारीमा थिइन् । १८ गते विहीबार बिहान दिल्लीमा कागतपत्र नबनेको खबर आयो । उनी अलि निराश भइन् । चित्र सुतिरहेका थिए । तनावमा रहेकी देउमायाले सुटकेशबाट खत्राक खुत्रकु कागत निकालिन् । दुवैजना बाहिर निस्किएर कफी पसलमा गए । बिहानको सामान्य नास्ता गरिसकेपछि साथीकोमा जान्छु भनी उनी निस्किइन् । चित्र घर फर्किए । दिउँसो डेढ बजेसम्म लोग्नेसँग उनी सम्पर्कविहीन भइन् । कहाँ गइन् थाहा भएन । १ बजेर ३० मिनेटमा सँगति वसुन्धरा खनाल र पाँच मिनेटपछि अन्तिम पल्ट सरिता पौडेलसँग १ बजेर ३५ मिनेटमा टाढा जाँदैछु भनेर उनले फोन गरेकी थिइन् । कुरा गर्दागर्दै अचानक काटियो भन्दै दुखी स्वरमा सरिता भाउजूले भन्नुभयो, सारै नरमाइलो लागिराखेको छ । दुई बजे सुमद्री किनारमा रहेको होटल मोनिका इसाबेलमा काम गर्ने कामदार र माछा मार्ने माझीहरुले लास तैरिएको देखेपछि पुलिसलाई खबर गरेका थिए । पुलिस दुई घण्टापछि मात्र आइपुगेको थियो । चित्रले रातभरी खोजिरहे पति चित्रले बेलुकी र राति मायालाई खोजिरहे । नाम देउमाया भएपनि सबैले माया गरेर उनलाई माया भनेर बोलाउने गर्थे । बिहान तीन बजेसम्म श्रीमतीको खोजीमा उनी अक्सर गइरहने मित्रहरुको घरमा सोधखोज गर्न गएका थिए । बिहान पनि श्रीमती खोज्न निस्किएका बेला परिचित पोर्चुगिजले अखबारको समाचार देखाएपछि मायाको दुखद खबर उनले पुलिस मार्फत थाहा पाए । चित्रजीले फोन गर्नुभयो हामी दौडेर पुलिस चौकी गयौँ। भित्तामा माया बैनीको हुलिया देखेपछि चित्रजीका आँसू खस्न थाले । छाँगाबाट खसे झैँ भयौँ । प्रेम परियारले भन्नुभयो । घटनास्थलमा छाता भेटियो “साओ जोआओ अभेइरो”को समुद्री किनार माया बसेको घरबाट त्यति टाढा छैन । गर्मी याममा घुम्न रमाइलो गर्न धेरै नेपालीहरु यही किनारै किनारै घुम्छन् । तर हिजो अलि अलि पानी परिरहेको थियो । पुलिसको हुलिया अनुसार समुद्री किनार खोज्न गएका नेपालीहरुको टोलीले मायाको छाता भेटेका छन् । श्रीमान् चित्रले मायाको छाता चिनिहाले । छाता हातमा लिएका चित्र बेहोश भएर त्यही चट्टाने ढुँगामा बजारिए । चट्टाने ढुँगामा पुग्न बडो अप्ठेरो छ । जाँदा जाँदै खोज्ने टोली मध्येका सुवास पोखरेलको खुट्टा पनि मर्किएर उनी पनि लडे । त्यस्तो ठाउँमा कसरी गइन् होला बैनी ? चिन्ताले एकोहोरिएको बेला उठ्दा भन्न रिँगाएर लडिन् कि ? नरमाइलो अनुहारमा पत्रकार केजिन राईले भने । हत्या कि आत्महत्या ? घटनाको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या जस्तो देखिएपनि पोष्टमार्टमको रिपोर्टले त्यस्तो केही देखाएन, अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म सार्वजानिक नगर्ने पोर्चुगिज कानून अनुसार लासलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको थियो । पोर्चुगिज टेलीभिजन पत्रपत्रिकाले त्यस साझको समाचारमा आत्महत्या जस्तो भएपनि अनुसन्धान भैरहेको बताएका थियो। दुईजनाको झगडा कहिल्यै सुनिएन लिस्बोनमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायको अन्तिम तयारीमा लागेका चित्र र मायाको जोडी लालजोडी नै थियो । कोठामा लामो समयदेखि सँगै बसिरहेका बम सारुले आफूले अहिलेसम्म चित्र र मायाले झगडा गरेको कहिल्यै नसुनेको बताएका छन् । लोग्नेछोराले गर्ने काम गर्ने आँटिली थिइन् माया, के भयो भयो ? बम सारुले भने । दिउसो लिस्बोनमा भएको मगर, शेर्पा, तामाँग, लिम्बू लगायत सबै जनजाति सम्मिलित जनजाति महासँघको वैठकमा पनि सो विषयमा आकष्मिक छलफल डाकिएको र सँस्थाले आवश्यक सहयोग तत्परताका साथ गर्ने निर्णय लिएको महासचिव दावा साँगे पाख्रिनले बताउनुभयो । यतिबेला अल्गार्भमा एनआरएन समन्वय परिषद सदस्य मकर हमाल, पोर्चुगलका अध्यक्ष लक्ष्मी सापकोटा, नेपाली जनप्रगतिशील मन्चका उपाध्यक्ष डिलाराम चापागाई, एनडीएफ सल्लाहकार सुवास पोखरेल, पत्रकार केजिन राई, समाजसेवी प्रेम परियार लगायतका नेपाली समुदाय सँघ सँस्थाका प्रतिनिधि तथा समाजसेवीहरुको आकष्मिक वैठक बसिरहेको थियो। देउमाया पुर्जाको लास नेपाल लैजानको लागि चाहिने आबस्यक सबै मदत गर्नको लागि सुरुदेखि नै क्रियासिल समाजसेवीहरु केजिन राई , सुवास पोख्रेल, प्रेम परियार, लिलाराज काङबाङ, दिनेश शर्मा लगायत लिस्बोनमा बस्ने पुर्जाका आफन्त, मगर संघ, म्याग्देली समाजका भलाद्मीहरुको जमघटले देउमाया सहयोग मूल समिति गठन गरेको थियो। मूल समितिको संयोजकमा केजिन राई हुनुहुन्छ भने अर्थ संयोजकमा थमन काउछा मगर हुनुहुन्छ. सदस्यहरुमा प्रेम परियार, सुवास पोख्रेल, लिलाराज काङबाङ, दिनेश शर्मा, अमृत परियार,रामशरण महत, भजिन्द्र बहादुर बस्नेत राम गुरुङ, बम सारु, केवल राना, अर्जुन अर्याल, बिस्नु बराल, भजनराज गुरुङ, नारायणसिं थापा, पुष्पराज गुरुङ, बिकाश गुरुङ, जुम प्रसाद गुरुङ, पेमा छोर्तेन, बिजी गुरुङ, शिवा थापा, शिव प्रसाद सुबेदी, गोपालराज पोख्रेल, सुर्य शर्मा, सुवास राना, नरेन्द्र लिम्बु, युबराज शाक्य, बुद्धि खड्का, अमृत पौडेल, संतोष भेटवाल, मोहन बश्याल, तिल बहादुर छन्त्याल, भुम प्रसाद गैरे, नरेन्द्र ढकाल, सरोज पुन, रेशम राना, अनिश तिवारी, गणेश तिवारी, डोलराज बश्याल, चोलाकान्त अर्याल, गणेश पुन, दिपक गुरुङ, कृष्ण बहादुर थापा लगायत हुनुहुन्थ्ह्यो। समितिले लिस्बोनमा एनआरएन पोर्चुगलका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको सहयोग समिति र म्याग्देली समाज, मगर संघ लगायत सहयोगी समुहसंग मिलेर काम गरेको थियो। देउमायाको निबासमा समबेदना दिन जम्मा भएका लिस्बोन, अल्बुफेरा, विलामोराका नेपालीहरुले सो मूल समिति बनाएका हुन्। गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय, लिस्बोनमा बसेको आकस्मिक बैठकले देउमायाको पार्थिव शरीरलाई नेपाल पठाउनको लागि आवश्यक आर्थिक र कागजपत्र जुटाउनको निम्ति सक्रिय एवंम समन्वयकारी भूमिका निभाउनको निम्ति गैर आवासीय नेपाली संघ,पोर्चुगलको अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा देउमाया सहयोग सह कमिटी गठन गरेको छ। समितिमा राम बहादुर गौचन, कुमार श्रेष्ठ, ज्योतिछायाँ गुरुङ, पदम प्रसाद तुलाचन, बालाराम बि.क., रुद्र बहादुर लिम्बु, राज कुमार गौतम, सक बहादुर नेपाली, भिम के.सी.’कमल’, टंकनाथ सापकोटा, रमेश गुरुङ, खेमराज रानाभाट”चिन्तन”, पेम्वा शेर्पा, डिलाराम चापागाईं, गीता गिरी, राजेन्द्र अधिकारी, तारा प्रसाद शेरचन, मान बहादुर पुर्जा, टेक बहादुर पुन, राजेन्द्र गुरुङ, हरिशचन्द्र नेपाली, उमेश चौलागाईं, केशव भट्टराई, झलक के.सी, हेमन्त सेढाई, सुर्य हमाल, राममणि रिजाल, विमला गोतामे, सुमन रेग्मी, गोविन्द दाहाल, हेमलाल सापकोटा, बल बहादुर खत्री, टिका आचार्य, गणेश याख्या,बुद्वि बहादुर गुरुङ, भरत पौडेल, विष्णु गौतम, नविन गौतम, तिर्थ घिमिरे, सुवाश अधिकारी, कमल गुरुङ, दुर्गा भण्डारी सम्मिलित ४३ जना पोर्तुगल्वासी नेपालीहरु हुनुहुन्थ्ह्यो। देउमाया सहयोग सह कमिटी पोर्तोमा सूर्य कार्कीको सयोजकत्वमा समिती गठन गरिएको थियो। समाजसेवी सूर्य कार्कीको व्यवसायिक स्थलमा भएको भेलाले समितिको अर्थ व्यवस्थापनमा भूपति गैरे, सदस्यहरुमा लक्ष्मण देवकोटा, गँगा प्रसाद न्यौपाने, सुरेन्द्र गौतम, दिनेश शर्मा, मोहन बहादुर खड्का, राहुल मगर, रवीन्द्र कार्की, तेजेन्द्र कार्की, सुरेन्द्र अधिकारी, शशिकान्त पाण्डे, सन्जीव ओली, शम्शेर राना, प्रकाश अधिकारी, रेनु गुरुँग, सुदीप श्रेष्ठ, राज कुमार श्रेष्ठ, तुल्सीराम न्यौपानेहुनुहुन्थ्ह्यो। लिस्बोनको सहयोग समिति र अल्गार्भको मूल समितिसँग समन्वय गर्दै कागजी कामका साथै यथाशक्य आर्थिक सहयोग गर्ने गरी समितिले काम गरेको थियो। देउमायाको पार्थिव शरीरलाई नेपाल पठाउन आवश्यक आर्थिक तथा डकुमेन्ट सम्बन्धि व्यवस्थापन गर्न पहलकारी भूमिका निभाउन गठित मूल समितिका संयोजक केजिन राईले सम्पूर्ण पोर्चुगलवासी एवंम यूरोपवासी नेपालीहरुलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नु भएको थियो। कागजी प्रक्रियाका लागि नेपाली बाणिज्यदूत डा.मारिया टेरेसा र पत्रकार लक्ष्मण देबकोटाको सहयोग पोर्तो क्षेत्रबाट अमूल्य रहेको थियो। झण्डै १४ लाख सहयोग सन्कलन : उनको नाममा मूलसमितीले देउमाया स्म्रिति प्रतिष्ठान(माया मेमोरियल ट्रष्ट) स्थापना गरि अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।अहिले सम्म मूल समितीमा बेलायत, नर्वे आदि गरि मूल समितीको तर्फबाट २७३३,०१ यूरो,भिलामोराबाट १०११,५० यूरो,पोर्चुगलबाट बसाई सरेका बेल्जियमका नेपालीबाट ४४०, पोर्चुगलबाट नर्वे बसाई सरेका नेपालीबाट १५० यूरो,नेवा पुचबाट ५० यूरो,किरात समाज पोर्चुगलबाट ३४५ यूरो,मोना,मगर समाज पोर्चुगलबाट २३७८ यूरो,एन आरएन पोर्चुगलबाट ३२९५,०५ यूरो पोर्तोबाट ३५५,५५ यूरो,तमू समाज पोर्चुगलबाट ५०० यूरो,जर्मनी मुनस्टारबाट ७१५ यूरो,नेपाल तामाङ धेदुङ पोर्चुगलबाट २१०,५० नेपाल शेर्पा सङ पोर्चुगलबाट २९२ यूरो गरी जम्मा १२४७५,६१ (झण्डै नेपाली चौध लाख नेपाली रुपैया) जम्मा भईसकेको कुरा मूलसमिति सयोजक केजिन राई र प्रेम परियारले जानकारी दिनुभयो।उक्त सन्कलित सहयोग रकम कत्ति पनि खर्च भएको छैन।शब लाने,टिकट ,मसलन्द आदि सम्पूर्ण खर्च पति चित्र पूर्जा स्वयमले ब्यहोर्नु भएको कूरा मूल समितिले बताएको छ। उक्त १२४७५,६१ यूरो मूलसमितिका केजिन राई,प्रेम परियार,सुबास पोखरेल,लिलाराज काम्बाङ,दिनेश शर्मा,थमन काउचा मगरको जिम्मामा रहेको छ।
« पत्रकारको सुरक्षा लैङ्गिक विभेद विरुद्ध कुवेती महिलाहरु जुरमुराए »
sunil,salmiya, on मार्च 10, 2010 at 6:51 अपराह्न said:
kati lamo story ho who is this writer????????